Qorshihii Fahad Yaasiin ee HOP86 oo fashilmay | KEYDMEDIA ENGLISH
Qorshihii Fahad Yaasiin ee HOP86 oo fashilmay
Madaxweynaha Hirshabeelle, waxuu kooxda waqtigu ka dhamaaday ku dhaadhiciyay in ay la heshiiyaan Genenal Xuud, oo laftirkiisa ka hor taagan inuu tago Hiiraan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay Keydmedia Online baahisay horraantii bishii November 2021, Agaasimihii hore ee hay’adda Nabad-sugidda iyo Sir-doonka Qaranka, eedeysane Fahad Yaasiin, ayaa doonayay in la beddelo degaan doorashada kursiga Golaha shacabka ee HOP86, kaas oo yaalla Baladweyne, si ay ugu fududaato inuu boobo.
Fahad Yaasiin, wuxuu khatar amni u arkayay tagitaanka Baladweyene, maadaama ay ku badan yihiin ehellada Ikraan Tahliil Faarax, oo gacantiisa ku maqan, wuxuuna doonayay in doorashada kursiga loo raro magaalada Jowhar.
Hayeeshee, xogo lagu kalsoonaan karo, oo ay heshay Keydmedia Online, ayaa sheegaya in wax walba is baddeleen kadib shirkii Golaha Wadatashiga ee soo gabagaboobay 9 Janaayo 2022, MW Hirshabeelle, Cali Guudlaawe, ayaana Fahad ku war-galiyay inuu kursiga u doonto Hiiraan.
Kulan Saddex geesood ah oo Madaxtooyada ka dhacay 14 January 2022, una dhaxeeyay Farmaajo, Fahad iyo Guudlaawe, ayaa is-fahan la’aan ku soo dhamaaday, kadib markii MW hirshebeelle, si cad u sheegay in uusan baddeli karin degaan doorashada Kursiga.
Saacado kadib, barqadii 15 January, waxaa mar kale, is arkay Fahad iyo Guudlaawe, inkastoo xogta kulankaas ay tahay mid aruursan, haddaana waxaa la caddeeyay in aan wax heshiis ah laga gaarin damaca Fahad ku doonayay in Baladweyne laga soo raro HOP86.
Guudlaawe, wuxuu sheegay in kursiga HOP86, ay indhaha oo dhan hayaan, qof kasta oo siyaasadda dalka ka warqabana uu si gaar ula socdo, sidaas daraaddeed, aysan macquul ahayn inuu isku furo dood adag iyo is qab-qabsi hor leh, xilligaan adag.
MW Hirshabeelle, waxuu Kooxda waqtigu ka dhamaaday ku dhaadhiciyay in ay la heshiiyaan Genenal Xuud, oo laftirkiisa ka hor taagan inuu tago Hiiraan, waxaana qadka taleefanka ku wada-hadlay Farmaajo iyo Xud ka hor inta aysan is maqlin Fahad.
Tallaabadas, waxa ay sababtay in Fahad iyo Farmaajo, wax ka baddelaan habkii ay ula dhaqmayeen reer Hiiraan Shantii sano ee ay talada hayeen, waxayna Baladweyne u direen General Biixi, oo ku magacaaban xilka Taliyaha Ciidanka Lugta, si uu Gen Xuud ugu geeyo lacag lagu ballamay, kadibna uu u soo wado Caasimadda.
Xuud, waxaa loo ballan qaaday in la siin doono lacag xooggan oo uu ku raadsado kursi Xildhibaan, isla-markaana helidda kursigaas ay ka gacan siin doonaan MW iyo MW ku xigeynka Hirshabeelle, sidoo kale, waxaa loo ballan qaaday deganaansho Turkiga ah, iyo lacag xooggan oo uu isga furfuro Jabhaddii uu isku dibbariday.
Fahad iyo Farmaajo, waligood ma raadin xalka dhibaatada muddada ka aloosneed Hiiraan, hayeeshee, si Fahad uga dego Baladweyne, waxa ay u marayaan waddo kasta, waxaa la filayaa in mar kale wakiillo ka socda Villa Soomaaliya, gaaraan Xarunta gobolka, si ay kulamo ula qaadaan odayaasha dhaqanka, si Fahad loogu soo dhaweeyo magaalada.
Fahad wuxuu isku diyaarinaya safarka Hiiraan, wuxuu loollan adag la gali doonaa Xildhibaan Farax Sheekh Cadulqaadir, oo afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay HOP86. Faarax wuxuu ka tirsan yahay Kooxda Damul-jadiid ee Xasan Sheekh hoggaanka u hayo.